Cappuccino na ofgha nke Nkwakọ ngwaahịa | Martech Zone
Izu gara aga m kwụsịrị maka McSkillet burrito n'ụzọ ọrụ. Enwere m ike idetu ozi banyere etu m si hụ ndị ahụ n'anya na nri ụtụtụ Qdoba, mana a ga m ahapụ gị. Mgbe m nọ McDonalds, mmasi m nwetara ihe kacha mma na m nyere McCafe Mocha iwu kama ịkwụsị m ụlọ ahịa kọfị kacha amasị.
Ihe ngosi mara mma, nke ọkaibe na nkwakọ ngwaahịa na ụda ụwa gbara gị gburugburu ma mee ka ọ dị gị ka ị na-arịgo kafe Europe. Not nọghị, n'agbanyeghị. Elere m anya nke ọma ka onye nọ n’azụ tebụl na-apị bọtịnụ aka nri, na-akpali ihe ndị dị na ya, ma jiri ude mmiri na mmanya kpụkọrọ mmanya gbanye ihe ọ drinkụ drinkụ ahụ.
M rutere n'ụgbọala, tookụrụ m mmanya mbụ, na… blech. Amaghị m ihe merenụ, ekwenyere m na e nwere nrụrụ aka na igwe ma ọ bụ ihe ọ bụla, mana ọ nụrụ ụtọ dị ka nsị expresso na-ekpuchi ude. Enwere m ike ịkọ kọfị ọ bụla (Anọ m n'ụgbọ mmiri maka ịdị mma), mana m ga-atụfu ya. N'ezie, ndị otu ha agaghị ama ma nsogbu adị - ha ga - amata ezigbo beef. 😉
Anyị nwere a Starbucks gbadara ala n’ebe ọrụ m dị, ya mere o siri ike ka hound kọfị gafere. Enwere m obi ụtọ karịsịa na mmiri mmiri pọmpụ ha… dịka nna nna anyị hà chọpụtara na Coca-Cola nwere cocaine, ana m atụ ụjọ na otu ụbọchị, anyị ga-achọpụta na Peppermint Starbucks nwere ihe iwu na-akwadoghị na ya.
Starbucks nwere akara doro anya doro anya, dị ọcha nke na-agwa ndị nọ gị gburugburu na,Enwere m nnukwu ego na m nwere ike iji $ 4 na ụfọdụ agwa ọkụ.”(Offọdụ ndị enyi m kpọrọ ya Iri anọ). Ewoo, akara ngosi ọdịbendị nke Starbucks amalitela ịjụ oyi. Adịkarịghị m see ogologo ahịrị ma nwee ike ịgafe Starbucks dị ka Ọdụ Gas na kọfị. Iko ahụ ka dị mma ma nwekwaa ike.
N'aka ekpe bụ, ma eleghị anya, kọfị m kacha amasị m. Ezigbo ndị enyi m Jason na Chris nwere nnukwu ụlọ ahịa kọfị, Egwuregwu Bean n'akụkụ ụlọ m.
A na-esi kọfị esi na kọfị kọfị nke Hamilton, Ontario. Ọ bụla inu, ọ bụrụgodị na ọ bụ decaffeinated, bụ ka ezigbo ezigbo, ọgaranya na creamy. O siri ike ịkọwa ọdịiche dị na agwa a roara n'ọkụ, n'ala, tamped na steamed nwere ike ịmepụta mmiri mmiri dị ụtọ na mmiri dị ụtọ. The baristas na Analọ ahịa kọfị kacha mma nke Indianapolis jiri nlezianya tụọ oge ọ bụla iji hụ na ekpomeekpo ya. Ọtụtụ mgbe, m na-ahụ ka ha na-atụfu ma na-emegharị agwa ruo mgbe ha ga-enweta mgbatị kwesịrị ekwesị - oge ụfọdụ iru mmiri nwere ike igwu egwu.
Ha anaghị efu ọnụ dị ka Starbucks ma ha dị oke mma (kachasị mma karịa McCoffee), mana iko ahụ dị larịị ma na-acha ọcha. Ọ dịghị ihe pụrụ iche… ma e wezụga maka ihe dị n’ime. Nke ahụ bụ ihe m bịara ịzụta, ọ bụghị ya? M do kwụọ ụgwọ maka ahụmịhe ụlọ ahịa ahụ ga-enye, kwa! Ọtụtụ ụlọ, ikuku na-akwụghị ụgwọ, na ụfọdụ oche dị mma.
Oh, ụgha nke nkwakọ ngwaahịa! Enweghị m ike iche n'echiche ego McDonalds mefuru iji gbalịa ime ka ihe dị n'ime iko ahụ ka ọ dị mma site na mpụga iko ahụ.
Tags: jason daraotutu ngalaba spfotutu spf ndekọppc gị n'ụlọngaretargetingnyocha spfspf ndekọnyocha spfIhe nkiri Igwe onyonyo
Jenụwarị 12, 2009 na 11:40 PM
Enwere m ike ịnagide kọfị na-adịghị mma, mana ọ dị m ka ọ bụ Motrin Mama. M na-anọnyere Starbucks n’ihi na ọ bụ naanị ebe m nwere ike ịga ezumike n’ọrụ ọ na-ekpo ọkụ ma nwee oche dị mma n’oge oyi. The edoghi inu, kọfị bụghị ukwuu na ikuku na-akawanye njọ na ụmụaka na-agba gburugburu dị ka obere anu ulo.
Lọ ahịa kọfị dị mma, ndị nweere onwe ha dị obere na akụkụ ndị a. Ma, enwere m ole na ole ma ana m akwado ha nke ọma. Ogologo ndụ iko a na-edeghị aha!
Jenụwarị 12, 2009 na 11:47 PM
You lelee Ffeelọ ahịa kọfị Indie? Ikekwe enwere onye dị nso karịa ka ị chere!
FYI: Na Starbucks na Broad Ripple, nnukwu kọfị (venti) bụ ihe karịrị $ 2.00. Ntanetị nke Bean Cup na-ekwu otu ihe ahụ bụ $ 1.55. Echere m na ifo nke $ 4 cup si ahịa dị ka NYC.
Ma, nnukwu post Doug!
Mụ onwe m gbalịrị kọfị McBlech. Didn't chọpụtaghị ọrụ ọ bụla. Amaara m nke ahụ n'ihi na m nyere ha ohere atọ. Otu oyi karama-flavored latte. Otu latte na-ekpo ọkụ. Otu ọkụ mocha. O juru m anya na ha dị njọ n'ezie. Ọ bụrụ na m nweta kọfị dị njọ na ụlọ ahịa kọfị, m ga-enyeghachi ya ma gwa ha ka ha nwaa ọzọ.
Ọ ga-eju m anya ma ọ bụrụ na onye ọ bụla ejiri imbibing kọfị-ụlọ ahịa kọfị ga-agbanwe. Ihe ngwọta m: azụrụ m ezigbo mma, mana igwe anaghị akwụ ụgwọ. Ihe nwere ike ịkwụ ụgwọ onwe ya n'ime otu ọnwa ma ọ bụ abụọ. Ugbu a, m na-eme onwe m kpọmkwem otu m si chọọ ha maka ọnụọgụ ego. Know ma ihe ha kwuru gbasara ezi n ’uwe.
Jenụwarị 13, 2009 na 2:04 PM
Ahuru m gi n'ihi @ swoodruff's Five in the Morning.
Adịghị m onye na-a coffeeụ kọfị ma abụ m onye na-a teaụ tii na enwere ụfọdụ ebe nwere "tii" n'aha ha mana na-esi ísì na tii.
Enwere m ọchịchọ ịmata ihe, ị naghị eche na ọ bụ mmeghe ahịa ka ị ghara inwe logo na iko kọfị gị?
Ka anyị kwuo na onye X nọ na kọfị nke ukwuu, ha gafere onye Y na-ejide kọfị kọfị. Onye mmadu X juo ebe onye mmadu nwetara kọfị. Ikekwe Onye X adịghị mma n’inye ntụzi aka, ma eleghị anya, Onye Y enweghị ntụzi aka, ma eleghị anya, Onye Y anaghị asụ Bekee nke ọma, yabụ Onye Y na-enwe nsogbu ịchọta ụlọ ahịa kọfị. Ọ bụrụ na ndị ide kọfị cup nwere n'ezie nwere a logo Onye Y ga mara ihe na-achọ.
Ka anyị bugharịa ihe atụ ahụ gbasara mmanya. M na-echeta aha ụfọdụ mmanya ma ọ bụghị ha niile. Mgbe m gara ịzụta mmanya, m na-ele ihe anya maka aha mmado.
Ekwenyere m na logos dị mkpa na ọ bụ mmejọ ịghara iji akara ngosi mepụta ngwaahịa gị.
Jenụwarị 13, 2009 na 8:30 PM
N'ịbụ ndị enyi nke iko Bean, ekwenyesiri m ike na ha enweghị akara ọ bụla naanị n'ihi ọnụahịa iko ndị ahụ. Ọ ga-akara ha mma itinye ego na nnukwu agwa ma ana m ekele maka nke ahụ!
Daalụ Steve maka mkpọtụ ahụ ma nwee olile anya na ị ga-alọghachi n'oge adịghị anya!
Ebee ka iko Bean a na-ekwu? 😉
Jenụwarị 14, 2009 na 11:44 PM
Na-akpali mmasị post. Ọzọkwa ịbụ onye ofufe nke ọkacha mmasị gị ụlọ ahịa kọfị-eme ka ọ ọbụna ọzọ na-akpali dị ka nke ọma. Ekwenyere m, echere m na njirimara ga - enyere aka Bean Cup, mana echere m na ọ ga - aba uru iji mee ya. N'ihe atụ dị n'elu, Echere m na Onye Y ga-eme ka Onye X mara ebe ọ bụla ha nwetara nnukwu kọfị na otu esi esi ebe ahụ. Ana m ekwu nke ahụ n'ihi na otu ihe m maara bụ na emeela m nke ahụ n'ọtụtụ oge.